Prepar3D FSX - AIRRCRAFT
Ity ny safidinay ny fiaramanidina kalitao tsara indrindra ho an'ny Microsoft Flight Simulator X (misy kinova) ary Prepar3D hatramin'ny v5. Hanatsorana ny fametrahana ny add-ons fampidinana tsirairay dia miaraka amin'ny installer mandeha ho azy. Misafidiana iray amin'ireo sokajy hanombohana ny fisintomanao.
Manana fiaramanidina maro karazana, na inona na inona tsiro hitanao fa tadiavinao ao aminay add-on fitehirizam-boky.
Fampidinana rehetra ho an'ny Prepar3D FSX - AIRRCRAFT